मिसौरी भांग र चिकित्सा मारिजुआना वकील | MO मा परामर्शदाता
मिसूरी क्यानाबिस कानून कानून ड्यान भिट्ससँग
के मिसौरीले २०२० मा वयस्क-प्रयोग भांगलाई वैध बनाउने छ?
मिसौरी भांग वकील, डान भिएट्स, Miss० बर्ष भन्दा बढी मिसुरीमा कानून अभ्यास गरिरहेछन्। उसले आफ्नो अधिकांश समय मिसौरीहरूलाई पुरानो भांग कानुनहरूबाट बचाउन बिताएको छ। एनओआरएमएलको बोर्ड सदस्य हुनुका साथै उनी आज रातको शोको "श्रोता पुरस्कार" कोनन ओ ब्रायनको रिसीभर पनि हुन् "कलेजको प्राध्यापक जसले तपाईलाई सँधै सताउन सक्दछन्" भन्ने लागिरहन्छ। उहाँ लामो समयदेखि भांगका पक्षधर हुनुहुन्छ जसले मिसौरीमा मनोरन्जन भांगको लागि लडाई गर्दै हुनुहुन्छ। यस हप्ता डान मिसौरी भांग कानून र उनीहरूले चुनाव दिनको लागि के योजना बनाएका छन् भनेर कुरा गर्न छोडे।
ड्यान भिट्स को हो?
मिसौरी भांगका वकील, ड्यान भिट्स, हाल कोलम्बिया, एमओ बाहिर काम गर्दैछ
आपराधिक भांग केसहरूको रक्षा गर्दछ
NORML निर्देशकहरूको बोर्ड र NORML का लागि मिसौरी राज्य संयोजक
मिसुरीको प्रत्येक सर्किट र संघीय अदालतमा उपस्थित भएको छ
१ 1986 sinceXNUMX देखि कानूनको अभ्यास गर्दै
मिसौरीसँग भांगको लागि उत्तम रेकर्ड नहुन सक्छ, तर तिनीहरू त्यो परिवर्तन गर्न कोशिस गर्दैछन्। मिसौरी २०२० मा मनोरञ्जन भांगलाई कानुनी मान्यता दिन चाहन्छ। मतपत्रमा जानका लागि उनीहरूलाई मे,, २०२० सम्म १ 2020०,१ 160,199 sign हस्ताक्षर चाहिन्छ। २०१3मा, मिसौरीले मेडिकल मारिजुआना र वेटरन हेल्थकेयर सर्विसेजको पहललाई बोलपत्रमा संशोधन गरीएको छ। मेडिकल प्रयोगका लागि कानुनीकृत भांग,%% को कर लागू गरियो, एक करले निर्दिष्ट गर्दछ कि कर राजस्व बुजुर्गहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा जान्छ। संशोधन २. 2020%% मतको साथ पारित भयो। घर बढ्न बिरामीहरूको लागि अनुमति छ रaकेही सर्तहरू जुन योग्य छन् PTSD, IBS, र पुरानो सर्तहरू समावेश गर्दछ।
वयस्कको प्रयोग मिसुरीमा कस्तो देखिन्छ?
मिसौरी भांगका वकील, डेन भिट्ससँगै नयाँ दृष्टिकोणका लागि मिसुरियनहरू, एक वयस्क-प्रयोग भांग पहल को लागी हस्ताक्षर भेला गर्दै छन्। यस पहल अन्तर्गत:
वयस्क २१+ लाई क्यानाबिस खरीद गर्न र कब्जा गर्न अनुमति दिइनेछ
केही गाँजा अपराधहरु माफ गरिनेछ
१ retail% कर रिटेल बिक्रीमा राखिनेछ
खुद्रा बिक्रीबाट कर राजस्व मिसौरी दिग्गज आयोग, राज्य सडक कोष, र गैर नाफा नकमाउने संस्थालाई लागु गरी लागू पदार्थको लत उपचार र ओभरडोज रोकथामको लागि छुट्याइनेछ।
मिसौरीमा भांगका वकीलले तपाईंको लागि के गर्न सक्छन्?
मिसौरीमा २०१ 2018 देखि मेडिकल भांग कानूनी छ। २०२० मा मिसौरीमा मनोरन्जन मारिजुआनालाई कानुनी बनाउन कानुनकर्मीहरूको जोडदार आग्रह हामी देख्छौं। यसले मिसुरी मारिजुआना बजारलाई कसरी असर गर्ने छ? के हामी बजारमा निष्पक्ष खेल हेर्न सक्दछौं जब यो राज्यमा बढ्ने, बेच्ने र मारिजुआना औषधालयहरूको कुरा आउँछ? हामी उत्तरहरू डान भिट्स र एसोसिएट्सको अंशको रूपमा दिन्छौं जसले मिसौरीमा व्यवसाय र मारिजुआना प्रयोगकर्ताहरूका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
के मारिजुआना २०२० मा मिसौरीमा वैधानिक हुनेछ?
मारिजुआना कार्यकर्ताहरू मिसुरी मारिजुआना कानूनहरू विनियमनको पक्षमा छन्। २०२० मा मिसुरीमा मारिजुआनाको वयस्क-प्रयोगको लागि मतदातालाई मतदान गर्ने अवसर हुनेछ, जसले यस राज्यमा धेरै व्यवसायिक अवसरहरूको लागि ढोका खोल्नेछ।
वित्तीय विश्लेषणले राज्यले २० 155२ सम्ममा १$2025 मिलियन डलर उत्पादन गर्ने देखाउँछ। यी भविष्यवाणीहरूले यस राज्यमा व्यवसायका अवसरहरू पाउने सम्भावनाको बारेमा बताउँछन्। धेरै राज्यहरूले नियामक प्रणालीलाई ठूलो मात्रामा राजस्व आर्जन गर्छन् जसले भांग प्रयोगकर्ताहरूलाई गाँजा उपभोग गर्न अनुमति दिन्छ।
जब यो मेडिकल मारिजुआनाको कुरा आउँछ भने अनुमानले हामीलाई भन्दछ कि २०२० मा मिसुरीमा १ ,2020, ००० पंजीकृत मेडिकल मारिजुआना बिरामीहरू हुनेछन्। तिनीहरू सबै आधिकारिक मेडिकल मारिजुआना कार्डका लागि योग्य छन् जुन चिकित्सा उद्देश्यको लागि मारिजुआना प्रयोग गर्नका लागि अनुमतिको रूपमा काम गर्दछ।
मारिजुआना वैधानिकरणले मिसौरीमा निजी कम्पनीहरूको लागि के अर्थ राख्छ?
नोभेम्बर २०२० को मतपत्रमा मिसुरीका मतदाताहरूले भांगको वैधानिकताका लागि मतदान गर्ने मौका पाउने छ जुन २१ बर्ष वा सो भन्दा बढि उमेरका व्यक्तिलाई एक औंस गाँजा राख्न मिल्छ। खरीद लाइसेन्स प्राप्त खुद्रा विक्रेताहरूबाट गर्न सम्भव छ जसले अब खुला भांग बजारको हिस्सा बन्न लाइसेन्स प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेका छन्।
राज्यले घोषणा गर्‍यो कि यस वर्ष मिसौरीमा १ 192 २ लाइसेन्स जारी हुनेछ, जुन यस वर्ष स्वीकृत हुने सबै आवेदन सबमिशनहरूको १ 16,5% मात्र हो। समग्रमा १,१1,163 आवेदकहरूले राज्यभर डिस्पेंसरीहरूको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कोशिस गर्छन्, जसले सम्भावित राजस्वको मात्राको बारेमा कुरा गर्छ यदि राज्यले थप आवेदकहरूलाई औषधालय इजाजतपत्र पाउन अनुमति दिन्छ भने।
यसको तुलनामा, कोलोराडोले २०१ 1,577 मा १,2018। मनोरञ्जनात्मक भांग व्यवसाय मालिकलाई इजाजतपत्र दियो। जारी इजाजतपत्रहरूको संख्या २०२० सम्ममा केही ह्रास आएको छ, तर हामी देख्न सक्छौं कि कोलोराडोले कोलोराडो भांग बजारको हिस्सा हुने औषधालय र साना व्यवसायहरूलाई कसरी समर्थन गर्दछ। जून २०१ In मा, कोलोराडोले भांग राज्य राजस्वमा १ बिलियन डलर पार गर्यो, जुन जिम्मेवार वयस्कको खपतका लागि धेरै अभियानहरूको परिणाम मध्ये एक थियो।
आधिकारिक स्वास्थ्य विभागले उनीहरूले चाहे जति धेरै लाइसेन्स जारी गर्न सक्दछ, तर मिसुरियनहरूको राय डिस्पेंसरी र खेती केन्द्रहरू यथोचित सीमित हुनुपर्दछ। औषधालय इजाजतपत्रका लागि आवेदकहरूले कडा चयन प्रक्रिया पार गर्दछ जुन एक स्कोरि system प्रणालीमा आधारित छ। धेरै आवेदकहरूले आवेदनहरू मूल्या of्कन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा गुनासो गरेका छन् किनभने निजी कम्पनीहरूले मूल्यांकन प्रक्रियामा आफ्ना नियमहरू छन्। यदि मिसौरीमा यो समस्या रहिरह्यो भने स्थानीय मारिजुआना व्यवसाय बजारले समग्र बजार राजस्व वृद्धिको ठूलो सम्भावना गुमाउन सक्छ।
मिसौरी भांग वकीलहरूले यस राज्यमा मारिजुआना वैधानिकरणलाई कसरी विनियमित गर्न सक्दछन्?
मिसौरीमा भांग वैधकरणको लागि समग्र पहलको साथ, गाँजा उत्पादको उचित लेबलि aboutको बारेमा प्रश्न उठ्छ। लेबलि regulations नियमहरूले मिसौरीलाई अन्य राज्यहरू जस्तै दक्षिण डकोटा र कन्सासमा प्रभाव पार्दछ, जहाँ लेबलिंगले उत्पादहरूलाई विशेष तरीकाले वर्गीकृत गर्नुपर्दछ। प्याकेजहरू र लेबलहरूले मानदण्डहरू पूरा गर्नै पर्छ जुन आधिकारिक सिफारिशहरूमा लागू हुन्छ। विज्ञापनहरूको विज्ञापन र मार्केटि also पनि राम्रोसँग नियमन गरिनु पर्छ, खास गरी जब यो २१ बर्ष मुनिका युवा जनसंख्याको लागि विज्ञापनको रूपमा आउँदछ। उत्पादनहरूलाई स्पष्ट रूपमा लेबल गरिएको र विज्ञापन गर्नुपर्दछ जुन युवालाई अपील गर्दैन।
के मिसौरीमा व्यवसाय सुरू गर्दा भांगका वकील खोज्नु राम्रो विकल्प हो?
मिसौरीमा मारिजुआना कानूनीकरणको लागि पहलले २०२० मा यसको पूर्ण कार्यान्वयन लिन्छ। हामी हेर्नेछौं कि यस राज्यले मनोरञ्जनात्मक मारिजुआना प्रयोगलाई नियमन गरेका राज्यहरूसँग कसरी तालमेल राख्छ। अधिकारीहरूले नागरिक नागरिक अधिकार क्षेत्र र कानूनको मामलामा मिसौरी भांग उद्योगका लागि यो एक ठूलो कदम हुनेछ भन्ने दाबी गर्छन्।
यदि तपाईं एक औषधालय वा खुद्रा पसल खोल्न को लागी, तपाईं एक खोज्नु पर्छ मिसौरी भांग वकील जसले तपाईंलाई मिसौरीको राज्यमा आवश्यक गाँजा व्यवसाय नियमहरूको साथ सहयोग गर्न सक्दछ।
ड्यान भिट्स कानून
पाहुनाको रूपमा आउन चाहानुहुन्छ? हाम्रो उत्पादकलाई ईमेल गर्नुहोस् lauryn@cannabislegalizationnews.com.